February 17, 2015 – democracy for burma
#MYANMAR #BURMA #Red #Cross #convoy #SHOT
On February 17, 2015 February 17, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, KOKANG, MYANMARLeaveacomment
Laukkaing refugee support Red Cross convoy had been shot in the morning by unknown attackers. VICTIMS WAS SENT TO HOSPITAL. CR.Kyaw Zay Lynn
Red Cross convoy attack to respond to the State
Laukkaing declared martial law in the region president office
!! #ကြက်ခြေနီအလံတင်၍ လောက်ကိုင်ရှိဒုက္ခသည်များအား
On February 17, 2015 February 17, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, HOSPITAL, KOKANG, MYANMAR, RED CROSS, VICTIMLeaveacomment
ကြက်ခြေနီအလံတင်၍ လောက်ကိုင်ရှိဒုက္ခသည်များအား သွားရောက်ကယ်ဆယ်သော အရပ်ယာဉ်တန်းအား ပါစင်ကျော်အနီး ကုန်းပေါ်မှ ဖုန်ကြားရှင်အဖွဲ့ဝိုင်းပစ်….
၈က/၈၆၈၈ ယာဉ်မောင်း မျက်လုံးထိမှန် ဒဏ်ရာရ..
ကွမ်းလုံဆေးရုံပို့ထားပြီးဖြစ်.. CR.Kyaw Zay Lynn
■ အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခြင်း ■
၁။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ပျက်ပြားလာသဖြင့် ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၄ အရ တားမြစ်မိန့် ထုတ်ပြန်၍ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။
၂။ သို့သော်လည်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများမှာ ပိုမိုများပြား ကျယ်ပြန့်လာပြီး ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ရုံဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ထိပါးအန္တရာယ် ပြုသည့် အရေးပေါ်အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်း ယနေ့မှစ၍ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာလိုက်သည်။
၃။ ဤအမိန့်သည် ယနေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း (၉၀)အထိ အတည်ဖြစ်သည်။
ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သော အမိန့်အမှတ် (၂/၂၀၁၅)
၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်)
၁။ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သောအမိန့် (၁/၂၀၁၅)ဖြင့် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာထားသည့် ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတွင် မူလအခြေအနေသို့ အမြန်ပြန်လည် ရောက်ရှိစေခြင်းငှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၂။ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် တာဝန်များကို လည်းကောင်း၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် တာဝန်များကို လည်းကောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အား အပ်နှင်းလိုက်သည်။
၃။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ယင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များကို မိမိကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည့် စစ်ဘက်အာဏာပိုင် တစ်ဦးဦးကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်စေခြင်း ပြုနိုင်သည်။
On February 17, 2015 February 18, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, KOKANG, MILITARY ORDER, MYANMAR, PRESIDENT OFFICELeaveacomment
(ကက) ပြစ်မှု ထင်ရှား စီရင်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ Continue reading “#နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး #စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း” →
#ဒါက်တာတင့်ဆွေ #ကိုကန့်နယ်မြေသမိုင်း #Kokang #background
On February 17, 2015 February 17, 2015 By Burma Myanmar newsIn BACKGROUND, Burma, china, KOKANG, MYANMARLeaveacomment
Kokang background ကိုကန့်နယ်မြေသမိုင်း ကိုးကန့်သမိုင်းကြောင်းကို ရေးနေကြတာမှာ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်။ အမေရိကန်အခြေစိုက် တရုပ် TV က ကိုးကန့်ကို တရုပ်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့အကျိုးစီးပွါးအတွက် နယ်မြေကိုတောင်ရောင်းစားသလို လွှင့်တယ်။ ဒါကတော့ တရုပ်ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးသဘော ဆန်လွန်းတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Kokang ကိုးကန့် တရုပ်နဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာ ဒီလိုရေးထားခဲ့မိတယ်။ ၁၈၉၄ အင်္ဂလိပ်-တရုတ် နယ်နမိတ်စာချုပ်အရ မိုင်းလမ်နဲ့ ကျိုင်းဟုံကို တရုပ်ကိုပေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်အနေနဲ့ အဲဒီနယ်နှစ်နယ်ကို အင်္ဂလိပ်မသ်ိဘဲ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကို မလွှဲပေးရဘူးလို့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်က ၁၉၁၅ ဇွန်မှာ ကျိုင်းဟုံနယ် တစိတ်တပိုင်းကို ပြင်သစ်ကို ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီအတွက် အင်္ဂလိပ်ကလျော်ကြေးတောင်းလို့ တရုတ်က ကိုးကန့်နဲ့ သိန္နီနယ်နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ နယ်အချို့ကို ပြန်ပေးတဲ့အတွက် ကိုးကန့်ကို မြန်မာပြည်၊ မြောက်သိန္နီနယ်ထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ Bertil Lintner (ဘာတဲလ် လင်နာ) ကနေ ကွန်မင့် ရေးထားတာက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး သမိုင်းမှန်ဖြစ်လောက်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ကိုးကန့်ဒေသကို တရုပ်ဝန်ကြီးချုပ် ချုအင်လိုင်းကနေ ၁၉၆ဝ မှာ မြန်မာအစိုးရကို လွှဲပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါ။ ကိုးကန့်နယ်မြေဟာ ၁၈၉၇ ကတည်းက အင်္ဂလိပ်နဲ့ တရုပ် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်တဲ့အခါ ဗြိတိသျှဗားမားထဲမှာ ပါနေပြီး ဖြစ်တယ်။ တရုပ်အစိုးရနဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ နယ်နိမိတ်စာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါ ချူအင်လိုင်းနဲ့ ဦးနုသဘောတူချက်အရ ကချင်ဒေသထဲက Hpimaw ဖီမော်နဲ့ ဝနယ်မြေထဲက Panhung-Panglao ပန်ဟန်-ပန်လောဝ် တို့ကို မြန်မာကနေ တရုပ်ကိုပေးပြီး၊ Namwan နမ်ဝမ်ကို မြန်မာကရတယ်။ အမှန်က အဲဒီနယ်ကို မြန်မာက ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းကတည်းက ပိုင်နေပြီးသာဖြစ်တယ်။ တရုပ်က ကချင်မြောက်ပိုင်းကို ယူချင်နေတာကိုတော့ လက်လွှတ်ပေးတယ်။ ဒီ ၁၉၆ဝ စာချုပ်မှာ ကိုးကန့်ဒေသက ဘာမှ ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ကိုးကန့်နယ်မြေဟာ မြန်မာပြည်ထဲမှာသာ ရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁၆-၂-၂ဝ၁၅